नियमित अण्डा खाने बानी छ ? यो पढेपछि छोड्नु हुन्छ - NepalTrending
तपाइँ हामीले अण्डालाई शक्ति वर्द्धक खानेकुराको रुपमा सेवन गर्दै आएका छौं । बच्च बच्चीलाई समेत अण्डलाई पोषिलो खानेकुराकोरुपमा नियमित खुवाउने गरिन्छ । तर आज समम्म भएका अण्डा विषयक कुनै पनि अनुसन्धानले अण्डाले हाम्रो शरीरलाई हित गर्ने देखाएका छैनन् । महामारीकोरुपमा बढ्दो उच्च कोलेस्टोरलको समस्यालाई अण्डा आहारले झनै बढाउने सिद्ध भएको छ ।
पछिल्लो समयमा ब्रोइलर कुखुराको अण्डा सेवन गर्ने स्त्रीहरुमा स्तनको आकार सानो हुने सुत्केरी हुँदा दुध नआउने जस्ता समस्या समेत हुन्छन् । ब्रोइलर अण्डाले नपुंकषकता बढ्ने, महिलाको गर्भाषयमा क्यान्सर हुने खतरा उच्च हुने समेत शोधले देखाएको छ । आयुर्वेद विशेषज्ञ डा. राजु अधिकारीको पुस्तक ‘खाने कसरी पिउने कसरी’ को पाठ्यांशमा आधारित । नेपालीहेडलाईन बाट
के तपाईलाई थाहा छ ? नियमित प्याज खानुका फाइदै फाइदा ! जान्नुहोस्…
युरिक एसिडले पीडित हुनुहुन्छ ? उसोभए बिर्सिएर पनि नगर्नुहोस् यी काम